Ma Kula Tartami Kartaa Google Ganacsi Weyn? | Martech Zone
Ma Kula Tartami Kartaa Google Ganacsi Weyn?
Axad, Janaayo 22, 2017 Douglas Karr
Kahor intaadan igu xanaaqin qodobkaan, fadlan si fiican u aqri. Ma dhahayo Google ma ahan ilo wax soo saar la yaab leh ama in aysan jirin wax suuq geyn ah oo ku saabsan maalgashiga labada istiraatiijiyad raadineed ama lacag bixin. Ujeeddadayda maqaalkani waa in ganacsiga weyn uu gebi ahaanba xukumayo natiijooyinka raadinta dabiiciga iyo kuwa la bixiyo.
Waxaan marwalba ognahay in lacag-bixinta-gujintu ay ahayd kanaal ay lacagtu xukuntay, waa qaabka ganacsiga. Meelayntu had iyo jeer waxay tagi doontaa qandaraaslaha ugu sareeya. Laakiin xeeladaha raadinta dabiiciga ayaa aad uga duwanaa. Muddo sanado ah, waxaan awoodnay inaan soo saarno nuxur laxiriira oo cajiib ah waxaanan ku abaalmarinay a lambarka 1 wuxuu ku qoraa erayga muhiimka ah ee tartanka Google. Maalmahaas waa baxeen.
Saaxiib wanaagsan Adam Small ayaa ordaya a madal suuq geynta guryaha. Dhawaan wuxuu ku sugnaa Magaalada New York at Isku xidhka Inman. Rand Fishkin oo reer Moz ah ayaa aftahan ahaa oo wuxuu ku muujiyay falanqeyntiisa in 5 domains ay kujiraan 5-ta guri ee ugu sareeya baaritaanka guryaha 25-ka suuq ee ugu sareysa Mareykanka.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aad tahay shirkad guryaha dhista oo leh boqol sano oo waayo-aragnimo ah mid ka mid ah magaalooyinkaas, fursadahaaga darajo waa wax laga naxo. Uma adeegsan inay sidan ahaato. Qiimaynta raadinta dabiici ah ee Google waxay fursad u ahaan jirtay ganacsi kasta si ay u horumariso waxyaabaha cajiibka ah oo ay tahay in la ogaado oo si fiican loo dhigo. Ma dhahayo waxay ahayd dadaal la'aan, waxay qaadatay culeys shaqo… laakiin way suura gashay.
SimilarWeb ayaa daabacday Abaalmarinta Momentum ee sanadka 2016. Abaal-marinnada la midka ah ee 'WebWent Momentum Awards' waxay aqoonsan yihiin degellada Mareykanka oo muujiyey horumar aan caadi ahayn oo ku saabsan qadka ay ku leeyihiin internetka sannadka 2016. 39-ka ku guuleystey 13 qaybood ayaa si guul leh kor ugu qaaday Meeleynta Webka - dhibic algorithmic ah oo lagu kala soocayo in ka badan 80 milyan oo goobood wadarta guud ee taraafikada iyo metelaada hawlgelinta.
Falanqaynta kuwan gudaheeda, waxaad kuheli doontaa raadinta inay tahay qodob weyn oo go'aaminaya shirkadaha xawaaraha ugu weyn leh. Waa kuwan abaalmarintooda ku guuleysta:
Suuqyada Internetka jeclaan.com samsclub.com kmart.com
Electronics Consumer shiil.com bestbuy.com bhphotovideo.com
Dharkii rue21.com victoriasecret.com torrid.com
Wakaaladaha Safarka ee Khadka Tooska ah tripadvisor.com Travelocity.com expedia.com
Silsilado Huteel marriott.com doorashadahothotels.com ihg.com
Adeegyada Jaaleynta Hoteelka hotelada.com airbnb.com trivago.com
Airlines jetblue.com aa.com ruux.com
Caymiska statefarm.com horumar.com geico.com
Banking citi.com gobollada.com navyfederal.org
Iibsiga Baabuurta carmax.com autotrader.com gawaarida.com
Wararka & Warbaahinta Fivethirtyeight.com realclearpolitics.com politico.com
Tech News ccm.net wararka.ycombinator.com digitaltrends.com
Wararka Ganacsiga Bloomberg.com money.cnn.com Foxbusiness.com
Soo Degso Warbixin Weyn ee Webka ee 2016
In kasta oo ay jiraan shirkado kooban oo aan adduunka xukumin, haddana waa shirkado waawayn oo jeebado qoto dheer leh oo iska leh suuqgeynta dhijitaalka ah ee internetka, oo ay hoggaaminayaan qiimeyntooda raadinta dabiiciga ah. Shirkadahani waxay awoodi karaan istaraatiijiyadaha omni-channel, oo ay ku jiraan waxyaabo adag oo la jaan qaadaya dhiirigelin qiimo leh, boggag internet oo aad loo habeeyay, iyo suuq geyn saameyn leh. Isku darkaasi waa qaali - laakiin wuxuu baabi’inayaa tartanka.
Tani waa sababta shirkadaha yar yar iyo kuwa wax u daabaca ay u isticmaalaan xooggooda si ay uga faa'iideystaan. Markaad fiiriso shirkadaha xukuma Google, waa inaadan kudayan. Waxaad u baahan tahay inaad ka soocdo iyaga, xitaa raadinta inaad fuliso ololeyaal istaraatiijiyado nuxur ah oo aan waligood khatar gelin doonin. Dhagaystayaashaadu wali waxay u gaajaysan yihiin wax ka duwan - sidee uga duwanaan kartaa? Haddii aadan ka sarreyn karin tartanka Google, ugu yaraan weli waad ku kalsoonaan kartaa bulshada si aad u ballaadhiso farriintaada.
Tani waa sababta istiraatiijiyad muhiim u ah macaamiisheennu ay u sii ahaanayaan cilmi-baarista iyo horumarinta sawir qaadayaasha, sawirada animated, Iyo waraaqaha caddaanka ah. Qeyb sifiican loo baaray, qurux badan, oo qiimo leh ayaa sii wadi doonta dareenka iyo awooda shirkadaada. Waxaa laga yaabaa inaadan darajo bixin, laakiin waa lagula wadaagi doonaa oo waxaa ku heli doona dhagaystayaasha ku habboon ee aad raadineyso.
Tags: 2016maraqa wakiilkagoogle +inmanabaalmarinta xawaarahamozraadinta dabiiciga ahraadinta lacagta lehmaqaarka kalluunka Randdarajeeyosuuq geynta guryahawebsaydh la mid ah